WatchOS beta 7 ikozvino iri mumaoko evagadziri | Ndinobva mac
WatchOS beta 7 ikozvino iri mumaoko evanogadzira
Maawa mashoma apfuura vagadziri vane mumaoko avo iyo nyowani beta vhezheni yeiyo watOS 7 inoshanda sisitimu, mune ino kesi iri nezve beta vhezheni 7 mushure mevhiki kubva pakuburitswa kweshanduro yapfuura. Mupfungwa iyi, vashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheApple Watch yeruzhinji beta vanofanirwa kumirira uye panguva ino hapana vhezheni yavo. Mune ino nyowani beta 7 vagadziri vanowana dzinoverengeka kugadzirisa mune fluidity yeiyo system uye yakajairwa bug inogadzirisa iyo yavanowanzo kuvhura mune yega yega vhezheni vhezheni.
Nhau dzeshanduro dze beta idzi dzatoonekwa kuti dzinoburitswa mushanduro dzekutanga, saka hazvisi zvakajairika kuti vatange kugadzirisa mune iyi mabhecha anotevera. Iye zvino Apple yave pedyo nekuvhura Apple Watch nyowani sezvatataura muNdiri kubva kuMac maawa mashoma apfuura, saka isu tine chokwadi chekuti idzi beta shanduro dzave kusvika kumagumo uye munguva pfupi inotevera tichava neshanduro dzekupedzisira dzakagadzirira kuiswa nemunhu wese.
Maawa mashoma apfuura Apple yakaburitsa iOS 13.7 yevashandisi vese pamwe nekugadziriswa kwakasiyana siyana uye kumwe kugadziridzwa kwakaitwa muchirongwa chine chekuita neECVID-19 yekutsvaga application. Pakupedzisira Apple inoenderera nekuvandudza mavhezheni ayo vhiki nevhiki, kungave kugadzirisa zvikanganiso kana kugadzirisa kugadzikana kwesisitimu. Mune ino kesi, vagadziri vanogona kutomisikidza iyo nyowani beta 7 vhezheni yewatchOS 7 paApple Watch, vhezheni inotumirwa seimwe yekupedzisira pasati pasvika vhezheni yekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS beta 7 ikozvino iri mumaoko evanogadzira
Chizvarwa chechinomwe iPod nano ichawedzera pane zvinyorwa zvevintage uye zvisingachashandi zvigadzirwa
Sekureva kwa Prosser musi wa Gunyana 8 tichava nenhau